Daharro Somalia - More information ﻿ encyclopedia › list › Daharro Somalia
Daharro Somalia ﻿Keywords: Daharro Somalia Description: Somalitalk.com December 2002: Heshiis ayaa dhex maray madaxda Somaliland iyo nin lagu magacaabo Meier oo reer Norway ah. Mr. Meier oo uu lasocdey nin asakiisu Hindi yahay oo la yiraahdo Rajan wax ay la kulmeen Daahir Rayaale Kaahin, heshiiskana waxaa la saxiixay wasiirkii Biyaha iyo Khayradka Dabiiciga ah, Mohamed Abdi Farah (Malow). [Eeg halkan ]
June 10, 2005: Terry waxa uu ka mid noqday wafti uu hoggaminayey madaxweyna DGPL, Gen. Cadde Muuse, waftigaas oo sii maray dubai, kaddibna aadey Nairobi si ayug aqayb galaan xafladii guuritaanka e DFKMg ayugu guureysey Soomaaliya. Waxaa kale oo waftigaas ka mid ahaa Wasiirka Qorshaynta iyo Xiriirika Caalamiga ah ee DGPL, Dr. Faroole. [Eeg halkan ]
Waftigii Puntland, Markii ay Nairobi tageen waxay la kulmeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha DFKMG, halkaas oo ay ku kala xanaaqen Gen. cadde Muuse iyo C/Laahi Yuusuf kadib markii DFKMG diidey in heshiis loo saxiixo Terry. [Eeg halkan ]
August 28, 2005: ayaa ra'iisul wasaraha DFKMG waxa uu war ka soo saaray magaalada Nairobi uu shaaca kag aqaadayin heshiis caalami ah oo ay gasho Puntland uu yahay waxba kama jiraan. [Eeg Halkan ]
August 29, 2005: ayaa DGPL waxay u jawaabtey hadalkii Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, ayagoo soo saaray war saxaafadeed uu ku saxiixnaa Axmed Cabdi Xaabsade oo ah Wasiirka Arrimaha Gudaha & Amniga ee DGPuntland. [Eeg halkan ]
August 31, 2005: Magaalaad Dubai ee dalka isutaga imaaraadka carabta waxaa heshiis ku saabsan baaritaanka khayraadka dabiiciga ah kala saxiixday Terry iyo DGPL, waxaana heshiiskaas goob joog ka aha madaxweynaha DGPL iyo wasiirka maaliyada (Dr. Gaagaab). [Eeg halkan ]
September 9, 2005: Madaxweynaha Soomaaliya, C/Laahi Yuusud Axmed oo jooga Jawhar ayaa yiri: "Sharci ahaan marka maanta in Puntland laga gar leeyahay anaa maanta qiraya, weliba Puntland-na waa ka imid, waana ku dhashay, madaxweyne waa u ahaa, ninkii dembi gelayaa yeelkiis anigu lama wadaago, ninkii khalad gelayaa yeelkiis." [Eeg halkan ]
September 10,2005: Wasiirka maaliyada DGPL, Dr. Gaagaab ayaa shir ku qabtay Boosaaso, waxana uu sheegay shirkada bishiiba ay bixin doonto $200,000 iyadana ammaankeeda loo sugi doono, waxana uu sheegay in ay hawsheeda bilaabi doonto October 2005. [Eeg halkan ]
.. Heshiiskii Xasan Abshir iyo Geeddi la galeen shirkad lagu sheegay inay difaaceyso xeebaha Soomaaliyeed ayaa mar kale furay shaki ah in madaxda dowladda qaarkood sameynayaan waxay rabaan. Shirkaddaas waxaa lagu sheegay “Topcat marine security”. Xasan Abshir wuxuu sheegay in shirkaddaasi ugu timid madaxweyne C/hi New York markuu ka qeybgalayey shirkii hogaamiyayaasha adduunka. Xasan Abshir wuxuu sheegay inuu ogaa shirkaddaas ayna marar badan la soo xiriireen intaan Geeddi iyo isagu saxiixin. Dhegeyso halkan.
Horuu Juriille u qaatay jagadii ra’iisulwasaaraha. La yaab ma leh in Juriille u raaco Geeddi dibadaha maaddaama uu sito jago ah iskaashiga iyo xiriirka caalamiga laakiin guddoomiyaha Koonfurta Mudug ayaa dadka ku baraarujiyey in xitaa Juriille usoo dhigtay inuu ka hadlo waaxihii loo qeybiyey gobollada Soomaaliyeed. Guddoomiyuhu wuxuu yiri sidee Juriille arrintaas uga hadlikaraa wasiirkii arrimaha gudaha oo soo taagan? Hadda heshiiskii Xasan Abshir iyo Geeddi la galeen shirkad lagu sheegay inay difaaceyso xeebaha Soomaaliyeed ayaa mar kale furay shaki ah in madaxda dowladda qaarkood sameynayaan waxay rabaan. Shirkaddaas waxaa lagu sheegay “T opcat marine security”. Xasan Abshir wuxuu sheegay in shirkaddaasi ugu timid madaxweyne C/hi New York markuu ka qeybgalayey shirkii hogaamiyayaasha adduunka. Xasan Abshir wuxuu sheegay inuu ogaa shirkaddaas ayna marar badan la soo xiriireen intaan Geeddi iyo isagu saxiixin.
Yuusuf Baribari oo sheegay in Talyanigu uu Soomaaliya u soo dirayo khubaro baaritaan ku samaysa sunta lagu sheegay Soomaaliya. Dhegeyso waraysi uu siiyey radio daljir Sidoo kale dhegeyso waraysigii Bashiir Sh. Maxamed ee noocyada sunta halista ah Dhegeyso
Waraysigii Radi Dalmar Warbixintii VOA ee sunta ku duugan Soomaaliya Dhegeyso SUNTA KU DUUGAN SOOMAALIYA
Xasan Abshir wuxuu si fiican u sharxay dhibka lagu hayo badaha Soomaaliyeed. Ha ahaadeen kuwa ay wadaan maraakiibta shisheeye ee ka kalluumeysta; sunta lagu duugo iyo burcad-badeedka Soomaaliyeed. Wuxuu carrabka ku dhuftay baahida loo qabo in arrintaas wax laga qabto. Hadalka Xasan sax buu ahaa laakiin waddaday mareen baa khaldaneyd. Laakiin waxaa dadka siyaasadda Soomaaliya u kuurgala ka yaabiyey sida Maxamed Qanyare uu saxiixaas ugu sheegay burcadnimo iyo boob. Qanyare wuxuu si cilmiyeysan u kala dhig dhigay inuusan Xasan Abshir shuqul ku lahayn wax ku saabsan amniga waddanka. Keliya uu golaha wasiirrada soo hordhigokaro si looga hadlo dhibta lagu hayo kheyraadka waddanka. Arrintu waa sida Qanyare u sheegay. Waxaan rabaa inaan sii xoojiyo arrinta Qanyare si dadka Soomaaliyeed u fahmaan waxa ra’iisulwasaare ama wasiir samaynkaro iyo wuxuusan samaynkarin. Bishaan Nufeembar waxaa ra’iisulwasaaraha Britain soo bandhigay qorshe ahaa in dadka “argagixisadaa” (muslimiinta) la heynkaro muddo 90 cisho ah inta baaritaan lagu hayo iyagoon maxkamad la soo taagin. Waxaa ra’iisulwasaaraha fikraddaas la qabay taliyaha booliiska Britain laakiin arrintaas waxaa gaashaanka ku dhuftay xildhibaannada baarlamaanka Britain. Xildhibaannada arrintaas diiday waxaa ku jiray in ka badan 30 ka tirsan xisbiga talada haya. Sidee ku dhicikartaa in Geeddi iska saxiixo heshiis horay loo soo maleegay isagoon soo marin labada gole midna? Mise Soomaalidaa dimuqraadiyadda uga horraysa caalamka kale? Qanyare haba laga hor istaago in loo sheego wuxuu wasiirka ku ahaaye meeyey Xuseen Ceydiidkii iyaga la jaalka ahaa? Ileyn isna waa wasiirka arrimaha gudahee mase laga wergeliyey arrintaas? Saxiixase goobjoog ma ka ahaa?
Geeddi oo daciifnimadiisu soo baxday markuu sheegay inuu Xamar degayo kaddibna ka laabtay markii Maxamed-dheere saxaafadda ka yiri: Geeddi baa dadkii jahwareerinaya – Xamar baa la degayaa; Jowhar baa la degayaa; Xamar baa la degayaa; Jowhar baa la degayaa. Maxamed-dheere wuxuu intaas ku daray in dowladdu raadsato magaalo kale maaddaama aanu Jowhar wada qaadikarin.
Wuxuu u rukuucay cadaadiska Zenawi isagoo leh: dowladdii Carta waxaa riday Zenawi marka suusan tan u ridin waa inaan yeelnaa wuxuu noo jeediyo. Arrintasi waxay dhinac marsantahay dhaqanka muslimiinta iyo kan gaalada. Ilaahay wuxuu na baray ineynaan isu dhiibin cadowga ugu weyn – sheydaan iska daa mid ka yare. Wuxuu Islaamku sheegay inaan cadowga cadow ka yeelano. Sidoo kale qofkii la socda taariikhda binu-Aadamka, lama arag cid leh cadow la isu dhiibo. Fiiri dagaalkii labaad siduu yeelay ra’iisul wasaarihii Britain, Churchill. Britain xag ciidan, cududda iyo tiknoolajiyaddaba aad bay uga hooseysay Jarmalka. Laakiin markii Hitler uu cagta mariyey Poland oo uu qabsaday Paris baa Britain dagaal iclaamisay iyadoon Britain weli la soo weerarin. Churchill sida Geeddi ma oran cadowga hala raalligeliyo laakiin wuxuu isku dayey inuu mintido intii la qabsanlahaa oo uu isdhiibilahaa.
Photogallery Daharro Somalia: File:Somalia location map.svg - Questpedia, the free encyclopedia File:Somalia location map.svg - Questpedia, the free encyclopedia ﻿ Details info of the Daharro Somalia
2013-11-5 Yangiobod Uzbekistan